IGolden Arrows ihlose ukunyukela endaweni yesibili ku-log | Scrolla Izindaba
IGolden Arrows ihlose ukunyukela endaweni yesibili ku-log
Uma iGolden Arrows inqoba ekuhambeni e-Tshakhuma Tsha Madzivhandila ngoLwesithathu ntambama, kungayibeka kalula endaweni yesibili kwi-DStv Premiership. ITshakhuma izoba yiqembu lesithathu elilandelayo lase-Limpopo elizobhekana ne-Arrows ezinsukwini eziyisishiyagalombili abadlale ngazo namanye amaqembu.
Abafana Bes’thende sebeqoqe amaphuzu amane kuBaroka FC nakuBlack Leopards. Ukunqoba e-Tshakhuma kuzokwenza iqembu laseThekwini lithathe amaphuzu ayisikhombisa kwayisishiyagalolunye uma selibhekene nezinhlangothi zase-Limpopo. Ngemuva kwalokho bazodlula i-Orlando Pirates bangene endaweni yesibili.
Yize iPirates ne-Arrows bezokwabelana ngamaphuzu afanayo (angama-35) lawa azobe eseqhulwini umahluko wamagoli. ITshakhuma isanda kuthola ushuni wabo futhi balwa ngamazinyo nezinzipho ukugwema ukwehliswa ku-log.
Njengamanje basendaweni yep-14 ngamaphuzu ayi-16 ngemuva kwemidlalo eyi-17. ITshakhuma iqoqe amaphuzu amane emidlalweni yawo emibili edlule. Lokho kuyamkhathaza umqeqeshi we-Arrows uMandla Ncikazi.
“Iphutha lethu elikhulu bekungukucekela phansi i-TTM ngokususelwa ekumeni kwabo kwi-log. Lapho abakhona njengamanje akuvezi isithombe sangempela ngabo. Bayiqembu elihle elinabadlali abahle. Ifomu yabo yakamuva idinga ukhathazeke ngayo,” kusho uNcikazi.
Ekuqaleni kwesizini uNcikazi uveze izinhlelo zakhe, wathi ufuna ukusheshe afike ezingeni lamaphuzu angama-30. Lokhu kuvame ukubonwa ngabaqeqeshi abaningi njengesiqinisekiso sokungehliselwa ezansi kwe-log.
Njengoba eseqoqe amaphuzu angama-32, uNcikazi usebona izinto ngendlela ehlukile.
“Ukunqoba uma sebebhekene ne-TTM nakanjani kuzosibona siqhubeka nenhloso yethu enkulu yale sizini. Sihlala sifuna ukuqoqa amaphuzu ayisishiyagalombili kuyo yonke imidlalo emihlanu. Ukuthola ayi-15 kungaba yibhonasi.
“Uma sinqoba sesibhekene ne-TTM, besizobe sesiqoqe amaphuzu ayishumi emjikelezweni wethu womdlalo. Ngakho sihlose ukuthola amaphuzu ayi-10. Amaphuzu amathathu azosisiza nokuthi siqhubeke nokukhuphuka ku-log.”
Umdlalo uzobanjelwa ePeter Mokaba Stadium e-Polokwane ngehora le-5 ntambama.
Eminye imidlalo ye-Premiership ngoLwesithathu ngehora le-5 ntambama:
Chippa vs AmaZulu (Sisa Dukashe Stadium)
TS Galaxy vs Leopards (Mbombela Stadium)
Baroka vs Stellenbosch (Peter Mokaba Stadium)